Light Iron dia manitatra vahaolana vaovao ho an'ny fiaraha-miasa lavitra | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Featured » Light Iron dia manitatra vahaolana vaovao ho an'ny fiaraha-miasa lavitra
Light Iron dia manitatra vahaolana vaovao ho an'ny fiaraha-miasa lavitra
Mpamatsy tolotra aorian'ny famokarana dia manohy mamela ny famoronana tsy misy marimaritra iraisana, manambara serivisy lavitra feno sy malefaka ary fanampiny manampy ny ekipa mpitarika.
Hatramin'ny niorenany tamin'ny taona 2009, Light Iron, orinasa Panavision, dia nanolo-tena hamerina handinika ny fizotran'ny asa aorian'ny famokarana. Io fanoloran-tena amin'ny fanavaozana io dia nahatonga ny orinasa hiomana tokana hiatrika ireo fanamby amin'izao fotoana izao, izay anerena ny indostrian'ny sarimihetsika mihetsika manontolo handinika ny fomba fiasan'izy ireo, manomboka amin'ny alàlan'ny asa fitoriana hatramin'ny alàlan'ny paositra. Rehefa mitady vahaolana hatrany ny famokarana mba hahatonga ny elanelam-be ataon'izy ireo ho lavitra, ny Light Iron dia namaly tamina fanavaozana maro ho an'ny dailies, fanontana an-tserasera, DI, ary famaranana izay manitatra ny safidin'ny mpanjifa na aiza na aiza no iasan'izy ireo, na dia toy ny sorona ao amin'ny orinasa aza. nanohy indray.
Fanamafisana bebe kokoa ny fanohanan'ny Light Iron an'ireo fandraisana andraikitra vaovao ireo, ny orinasa dia nandray ny ekipa ekipa telo fanta-daza ho an'ny ekipany mpitarika ambony. Seth Hallen, Phil Harrelson, ary Laura Borowsky dia hanampy amin'ny fampiroboroboana ny fotodrafitrasan'ny orinasa, hanitatra ny tolotra serivisy ary hanohana ny talenta an-trano raha mbola manohy mikolokolo ny fiaraha-miasa, manavao ary milamina ny tontolo iainana izay fantatra ao amin'ny Light Iron.
Peter Cioni - Tale mpitantana mpiara-miasa
Rehefa nijanona ny famokarana tamin'ny fiandohan'ity taona ity manoloana ny fanidiana hidy manerantany hiadiana amin'ny fiparitahan'ny COVID-19, ireo tetikasa efa niasa dia tsy maintsy nifanaraka tamin'ny sidina mba hitondrana ireo lalan-dry zareo. "Hatrany am-boalohany, iraka ataontsika ao amin'ny Light Iron ny hitarika ny mpanjifanay amin'ny alàlan'ny teknolojia sy ny onjam-panovana miovaova hatrany amin'ny famokarana aorian'ny famokarana mba hahafahan'izy ireo mifantoka amin'ny fitantarany ny tantarany tsy misy marimaritra iraisana," hoy i Peter Cioni, tale mpitantana ny Light Iron. "Nanana fitaovana finday sy fiaraha-miasa lavitra izahay, afaka namindra tsara ireo mpanakanto sy mpanjifanay tsy ho eo an-toerana, ary nitondra ny traikefa an-tranonay tany an-tranon'izy ireo tsy nisy tara - na fetr'andro iray."
Light Iron dia mpisava lalana tany am-boalohany ny alàlan'ny dailies finday, ary ny orinasa dia manohy manavao miaraka amin'ny Outpost Remote Control (RC), ny taranaka farany farany an'ny vahaolana Outpost efa akaiky azy, izay mamela ny mpandoko miloko Light Iron hifehy ny rafitra feno lavitra, na inona na inona ny elanelan-tany. Ny rafitra RC Outpost dia azo apetraka haingana ao amin'ny biraon'ny famokarana, foibe angon-drakitra, na aiza na aiza mety amin'ny famokarana, manome ny tombony rehetra amin'ny vahaolana akaiky indrindra nefa tsy mitaky fandokoana ho eo ara-batana. Io dia mamela ny famokarana hitazona ny laharan'ny ekipany eny an-toerana - izay mijanona ho laharam-pahamehana mandritra ny COVID-19 - sady manome ny fahaizan'ny cinematographers hiara-hiasa amin'ireo mpandoko loko any amin'ny lisitra Light Iron, na aiza na aiza toerana misy ny mpandoko.
Light iron dia nanitatra ihany koa ny vahaolana fanofana an-tserasera mba hitondrana mivantana ny mpanjifa ny traikefa voalohany amin'ny alàlan'ny fanolorana ao New York toerana misy azy, manome fitaovana azy ireo amin'ny fametrahana an-trano feno izay mifandray tsara amin'ny fotodrafitrasa lehibe Light Iron. Ny fandefasana fonon-tànana fotsy Iron Light dia manome ny zavatra rehetra ilain'ny mpanjifa, manomboka amin'ny fanaka ka hatrany amin'ny hardware - ao anatin'izany ny fanaraha-maso ny fahatokisan-tena ao amin'ny SDI - miaraka amin'ny fanohanana feno sy tsikelikely hananganana ny rafitra. Vantany vao tafapetraka, ny rafitry ny mpanjifa dia mifandray ary mamaky avy amin'ny azo antoka mazoto Mpizara Nexis izay mipetraka ao amin'ny Light Iron, miaraka amin'ny fidirana amin'ireo fotodrafitrasa azo itokisana, fanohanana ary traikefa fitahirizana iraisana izay ho azony raha miasa ao amin'ilay toerana izy ireo. Ny fanofana fanontana lavitra an-tserasera an'ny Light Iron dia ampitaina ao amin'ny faritr'i New York City, miaraka amin'ny fanitarana faritra natao tamin'ny voalohan'ny taona 2021.
Ho an'ny DI sy famaranana, ny Light Iron dia manome vahaolana marimaritra iraisana (mivantana) sy tsy misy arika mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa. Tetikasa izay nahavitan'ny Light Iron vao haingana tamin'ny alàlan'ny dalambe lavitra dia ahitana ny andiany What We Do in the Shadows, Next, The Queen's Gambit, The Haunting of Bly Manor, ary ny Social Distance, ary ireo fiasa One Night In Miami, Wander Darkly, ary What the Midika ho ahy ny lalàm-panorenana.
Ankoatr'izay, nanomboka ny faran'ny volana Jona, dia nampiantrano mpanjifa mivantana manokana ny Light Iron. Ny orinasa dia manolo-tena hanome traikefa azo antoka, azo ovaina ary mahomby, ary nametraka paikady fiarovana vaovao ho an'ny mpanjifa miasa ao an-toerana, ao anatin'izany ny programa fanadiovana feno, ny fomba fanaovan-tsakafo nohavaozina ary ny fetran'ny fivezivezena henjana ary ny halaviran-dàlana mety. Ny politika sy fomba fiasa farany ary ny fampahalalana momba ny toetr'andro farany ho an'ny toerana misy ny Light Iron dia hita ao amin'ny foibe loharanon-karena COVID-19 Light Iron, www.lightiron.com/covid.
Manohana ny fanitarana ny serivisy, ny Light Iron dia nanamafy ny ekipany mpitarika niaraka tamin'i Seth Hallen, Phil Harrelson, ary Laura Borowsky farany teo.
Seth Hallen - Tale mpitantana mpiara-miasa
Seth Hallen dia manatevin-daharana ny Light Iron ho talen'ny fitantanana mpiara-mitantana, mitondra fahaiza-manao betsaka amin'ny famokarana sy ny toeran'ny ekipa, miaraka amin'ny traikefa amin'ny fitarihana am-polony taona maro ary fifandraisana maro samihafa amin'ny indostria. Miaraka ambadika toy ny fananan'ny orinasa ao anatiny Sony, mpandraharaha ary CEO, Hallen dia filohan'ny Hollywood Professional Association (HPA), andraikitra notananany hatramin'ny 2016.
"Ny fahitana ny fitomboan'ny Light Iron tato anatin'ny folo taona lasa dia nahagaga," hoy i Hallen. “Hatramin'ny voalohany, ny orinasa dia namerina nandinika ny fomba fanaovana ny famokarana taorian'ny nananganana laza ho an'ny kolotsaina mifantoka amin'ny mpanjifa mifantoka amin'ny mpanjifa. Ireny vahaolana vaovao momba ny workflow ireny dia manome ny mpanjifa fahalalahana bebe kokoa nefa tsy mahafoy ny fahitany ny famoronana. Tena nankafiziko foana ny talenta famoronana tamin'ny famokarana paositra, ary faly aho hiara-hiasa amin'ireo mpanakanto Light Iron, izay natokana manokana hanekena ny fivoarana filmmaking teknolojia sy vahaolana vaovao mpisava lalana mba hamoahana ody eo amin'ny efijery. ”
Phil Harrelson - VP an'ny asa
Amin'ny maha VP ny asa ataon'ny Light Iron, i Phil Harrelson dia tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny hetsiky ny orinasa amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny fifantohana manokana amin'ny fampiharana ireo rafitra sy fomba hanampiana ireo mpanjifa tsara kokoa. Harrelson dia manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny famokarana aorian'ny famokarana
indostria manerana ny VFX, dailies, famokarana ary varotra, ao anatin'izany ny enin-taona miasa ao amin'ny Deluxe. Mitondra fahaiza-manao miavaka isan-karazany novolavolainy ho mpanjifa roa izy - niasa nandritra ny folo taona mahery ho mpanara-maso sy mpamokatra lahatsoratra ho an'ny andian-dahatsoratra sy mpivarotra.
Laura Borowsky - Talen'ny fampandrosoana ny orinasa
Ny talen'ny fampandrosoana ny asa vaovao, Laura Borowsky, dia nitondra ny traikefa niainany nandritra ny 19 taona niasa tamin'ny endrika lay, indie ary dokambarotra hanitarana ny ekipan'ny Light Development's Light Development, izay tarihin'i Katie Fellion. Borowsky dia nanomboka ny asany tamin'ny Technicolor, ary tamin'ny alàlan'ny sanganasany dia nanjary nanana fifandraisana matanjaka niaraka tamin'ny mpanjifa studio izy ary koa ny famoronana, anisan'izany ny sinematographer sy ny talen'ny famoronana fiaraha-miasa matanjaka niaraka tamin'i Panavision. Miorina amin'ny Los Angeles, Borowsky dia avy any Atlanta, ary ny anjara asany vaovao dia hisy fifantohana amin'ny fampandrosoana ny tsena atsimo atsinanana.
"Nandany fotoana be izahay nanomezana antoka fa manana ekipa tsara indrindra hanohana ny filan'ny mpanjifanay rehetra izahay, ary ity dingana fandraisana mpiasa ity dia manamarika ny dingana lehibe manaraka amin'ity ezaka ity," hoy i Cioni. “Seth, Phil, ary Laura dia mitondra traikefa be dia be amin'ny indostria. Izy ireo dia samy hanatsara ny fahaiza-mamorona azontsika omena ny mpanjifantsika ary hametraka antsika amin'ny toerana tsara indrindra hanohizana ny fanaovana an-dàlana ny làlan-kizorana amin'ny alàlan'ny ary aorian'ny fikorontanana ateraky ny COVID-19. ”
"Na eo aza ny fanamby goavana natolotra tato anatin'ny volana vitsivitsy, dia manantena izahay momba ny hoavin'ny indostria sy ny fahaizanay manokana hanohanana ny mpanjifanay," hoy i Cioni nanampy. “Rehefa mivoatra hatrany ny paositra sy ny famokarana, dia mijanona amin'ny toerana nisy azy hatrizay ny fifantohan'i Light Iron, amin'ny fanomezana hery ny fahaizan'ireo mpanjifanay. Izahay dia mamorona fomba fiasa vaovao tsy tapaka hanatanterahana ny filan'izy ireo, ary eto foana izahay hanampy azy ireo hahita - na hamorona - ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny tetikasan'izy ireo manokana. Miaraka amin'ity fanitarana ny serivisy sy ny serivisinay ity, ny mpanjifanay dia afaka manararaotra manovaova bebe kokoa noho ny teo aloha ary mankafy traikefa aorian'ny famokarana tsy misy tohana izay manome antoka fa ho hitan'izy ireo ny fahitany avy eo an-toerana, na aiza na aiza no hisafidianany hiasa . "
Light Iron, orinasa Panavision, dia eken'ny besinimaro ho mpitarika teknolojia sy mpiara-miombon'antoka amin'ny kanto amin'ny famokarana farany sy vahaolana amin'ny paositra. Ny mpamokatra sary, ny studio, ny famoronana ary ny teknolojia dia miankina amin'ny fahaizan'ny Light Iron handefasana tsiranoka dizitaly miandalana, manomboka amin'ny dailies sy ny fitantanana data ka hatramin'ny serivisy arsiva miloko farany sy media. Miaraka amin'ny habaka sy toerana fampanofana ivelan'ny Amerika Avaratra misy fahaiza-manao lavitra, Light Iron dia manam-pahaizana manokana amin'ny mailaka hanompo ireo filàna tsy manam-paharoa amin'ny tetikasa sarimihetsika sy fizarana épisode.
Previous: Vizrt Group dia manakarama an'i Daniel Url hanamafisana ny fifantohan'ny mpanjifa amin'ny fampandrosoana ny vokatra
Next: Ny Art Loft dia miditra amin'ny vanim-potoana faha-9 ao South Florida PBS!